Uthi baphatheka kabi ukudlula abalandeli uma bengawinanga uZinnbauer wePirates osenyamanambana kubalandeli - Impempe
Uthi baphatheka kabi ukudlula abalandeli uma bengawinanga uZinnbauer wePirates osenyamanambana kubalandeli
Umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer othi kuyazwela nakubo uma bengenzi kahle
Umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnabuer uthi uyaziqonda izizathu ezenza ukuthi abe nyamanambana kubalandeli beqembu kulezi zinsuku. Sekunedlanzana labalandeli beBucs abaveze ukungeneliseki kwabo ngalo mqeqeshi waseGermany, bethi usephelelwe ngamaqhinga ngakho kumele ashenxe.
“Bahlezi benemibono ehlukene. Omunye uzohlangana nawe athi ‘ungumqeqeshi okahle impela, usikhiphe ehlazweni kade singawini lutho iminyaka eyisithupha kodwa manje sesinendebe ngenxa yakho’.
“Bese omunye aqhamuke ethi ‘asinelisekile ngawe, sifuna okungaphezulu kwalokhu osinika khona’. Ngiyabaqonda abalandeli, bahlale benemibono ehlukene,” kusho lo mqeqeshi obuye abizwe ngo-JZ.
‘Kukhona abaluhlaza, kukhona ababomvu, bese kuba khona abaphuzi… bahlezi behlukene. Inkinga ukuthi abalandeli bahlezi befuna amaphuzu amathathu.”
Ube eseveza ukuthi laba balandeli asebefisa adede ngathi basheshile ngoba kusekude phambili emjahweni weDStv Premiership kwazise iqembu yikhathi lizodlala umdlalo walo ka-15 ngoMgqibelo. Lizobe ligadulisana nezimbangi zalo ezinkulu iKaizer Chiefs e-Orlando Stadium ngo 3.30 ntambama.
“Eqenjini elikhulu njengePirates bafuna impumelelo njalo nje. Kodwa kumele siyisebenzele, isizini isekude ukuphela. Ngiyakuqonda ukuthi baphatheka kabi uma singenzi kahle, imiphumela isiphika.
“Ngiyazi benziwa wuthando lweqembu, kodwa ibhola silibona ngezindlela ezihlukene… kumele sisebenze ngokuzikhandla. Ngale kwalokho, akukho engingakwenza ngokushiwo abalandeli.
“Uwina imidlalo emithathu kulandelana, ube yiqhawe, umqeqeshi obedlula bonke emhlabeni. Kodwa ake udliwe kwemithathu kulandelana uzoyibona inqaba, uba ngumqeqeshi obheda kunabo bonke emhlabeni.
“Nathi siphatheka kabi uma singakwazanga ukuqoqa amaphuzu amathathu, mhlambe sikhathazeka ukwedlula kwabona abalandeli. Kodwa siyaqhubeka sisebenze, sisebenze… ngoba sisuke sifuna ukuthola amaphuzu amathathu emdlalweni olandelayo,” kuchaza uZinnbauer.
Uma engaphinda ashaye iChiefs njengoba enza kwiMTN8, uZinnbauer engazithola esevutha ekhaleni futhi kubalandeli beBhakaBhaka. Phela ukuwina lo mdlalo woMkhaya kuyinto enkulu futhi ebalulekile kubalandeli bawo womabili lamaqembu.
Previous Previous post: UShalulile ucacisa eyokushutheka ijezi esikhindini
Next Next post: ‘Vele siyamkhumbula uBilliat,’ kusho isikhulu seSundowns